ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ CAD, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ကနေဒါဒေါ်လာ, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — CAD ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ကနေဒါဒေါ်လာ, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,00 CAD ကနေဒါဒေါ်လာ
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/CAD ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 00:59
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ကနေဒါဒေါ်လာ (CAD). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 00:59.
ကနေဒါဒေါ်လာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို CAD) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ကနေဒါ.
54902,63
109805,27
50 49 026,34
100 98 052,67
200 196 105,34
500 490 263,36
1000 980 526,72
2000 1 961 053,44
50004902 633,61
100009805 267,21
20000 19 610 534,42
50000 49 026 336,06
ငွေကြေးက ISO code ကို CAD
အထိမ်းအမှတ် $ • CA$ • C$
ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 25, 50 ဆင့်, 1,2CAD
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 5, 10, 20, 50, 100 CAD
ပူစီနံ တော်ဝင်ကနေဒါ Mint, (Winnipeg), တော်ဝင်ကနေဒါ Mint, (Ottawa)
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0369 s.